Ilay rivodoza « Belna » no mandrafitra ny toetr’andro eto Antsiranana. Mbola mavesabesatra ny lanitra io tolakandro io ary manomboka avy be ny orana, taorian’ny orana nijojo hatramin’ny alina. Saika dibodrano ny ankamaroan’ny tanàna Antsiranana tampon-tanàna. (Jereo Sary Tohiny)
Lasibatry ny mpangalatra ny tarobia mitondra herinaratra mampihodina ny toby famokaran-drano eny Amoronakona. Ny alin’ny sabotsy hifoha androany alahady no nisehoan’ny halatra, araka ny fampitam-baovaon’ny Jirama. Vokan’izany dia miato ny fanaovana andrana famatsian-drano an'Ambohimangakely - Ambohimahitsy sy ny manodidina. Efa mandray ny andraikiny amin'ny fanoloana io tarobian-jiro io ny Jirama mba hahafahana manohy ny andrana famatsian-drano ataon'ity toby ity.
Sary Faritra Analamanga
Hampiasa kamiao miisa 40 sy fitaovana vaventy miisa 4 ny Faritra Analamanga hanesorana ny fako misavovona eto an'Antananarivo renivohitra. « Tsy hijanona ny asa raha tsy voadio sy voaala avokoa ireny fako ireny », araka ny nambaran’ny Governora Hery Rasoamaromaka, nandritra ny fidinana ifotony nataony teny Namontana, Boriborintany faha-4, Antananarivo Renivohitra. (Jereo Sary Tohiny)
Tarobian-jiro mirefy 2 km, izay mitondra ny herinatra avy any Volobe mankao Toamasina no nisy nangalatra, ny zoma 06 desambra tokony ho tamin'ny 1 ora maraina. Tsy mbola tomombana ihany koa ny milina mpamokatra herinatra an'ny ENELEC, izay tsy manome afa-tsy 4,5 MW raha tokony ho 16 MW izany. Mbola ahiana noho izany ny hisian'ny fahatapahan-jiro mifandimby aty Toamasina satria tsy misy afa-tsy 19,5 MW ny herinatra afaka vatsiana ho an'i Toamasina vokatr’ireo olana ireo, raha toa ka 27,95 MW ny filana ambony indrindra amin'ny ora be mpampiasa.
Nifarana omaly zoma 06 desambra ny fampitahana taratasy fitanana an-tsoratra ny latsabato ho an'ny rafitra mikirakira ny voka-pifidianana kaominaly ho an'ny Faritanin'Antananarivo. Ny alatsinainy 9 desambra izao no hamoaka vokatra vonjimaika feno ny eto amin'ny faritanin'Antananarivo. Hatao eny amin’ny foiben’ny CENI eny Alarobia ny lanonana mikasika izany. Samy ho amin'io herinandro ho avy io avy ihany koa ny famoahana voka-pifidianana an'ireo Faritany 5 hafa. (Jereo Sary Tohiny)
Nisesy ny vono olona miaro halatra tato amin’ny Distrikan’Ankazoabo tato ho ato. Ny alatsinainy teo tao Ambalamarina, dia tovolahy iray 18 taona no maty nisy namono, ary noloarana ny voamasony roa. Lehilahy iray ihany koa no maty nisy namono tao Ampandramitsetaky, Kaominina Tandrano. Tranga toy izany koa no niseho tao Morahariva, Kaominina Berenty. Miantso vonjy amin’ny manampahefana ihany koa ny aty an-toerana manoloana ny firongatry ny vaky fasana tato ho ato. Hatreto tsy misy voasambotra ireo navanon-doza.